Ecotourism na Australia | Njem zuru oke
Chọ ọdịdị na nke okike ga-ekwe omume ịchọta n'otu n'ime mba ndị mejupụtara kọntinent nke Oceania. Anyị na-ezo aka Australia, nnukwu ule nke ókèala na-adọrọ mmasị, nke ihe nkiri ya karịrị atụmanya nke ndị ọbịa kachasị achọ. Mpaghara ọ bụla nke mba a nwere amara na ọrụ ebube ya, ya na ya ecotourism Ọ na-egosi onwe ya na ike dị ukwuu iji mee anyị obi ụtọ.
Ma ọdịdị, ọdịbendị na akụ na ụba guzobere dịka ntọala nke alaeze ala Australia, obodo ya, n'agbanyeghị na ha nwere ọtụtụ ebe nkiri, nwekwara na mpaghara okike, ikike siri ike nke ịrata ndị njem. Oghere ya, nke nwere oke ala na mbara ala, na-eweta ụdị ndụ na-enweghị atụ. Na-anwa anwa ịchọpụta ha?
N'ime floral na fauna nke Australian ị pụrụ ịhụ pụrụ iche na osisi na umu. Osisi nke Australia bu ihe puru iche ebe obu na enwere otutu ohia dika eucalyptus, oke ohia nke ebe ohia, oke ohia, tinyere ndi ozo. You mara na ihe karịrị ụdị 22,000 dị iche iche nke ahịhịa na okooko osisi nwere ike ịdị iche na Australia? Ee, ma banyere ha ihe karịrị puku abụọ bụ ụmụ amaala nke ebe a na enweghi ike ichota na mpaghara ozo.
Banyere ụmụ anụmanụ, ọ bara uru ịkọwa na ha nwere mega fauna n'ihi na ha nwere anụmanụ dị iche iche, anụ na-akpụ akpụ, azụ, ụmụ ahụhụ na amphibians, ha niile pụrụ iche. Anụmanụ ndị a na-ahụkarị n'Australia bụ kangaroos ndị mara mma na koala ndị na-adọrọ adọrọ na anụ ọhịa ndị na-esighị ike ịchọta. Obi abụọ adịghị ya na Koalas bụrụ ọkacha mmasị onye ọbịa ahụ ebe ọ bụ na ọ nọ jụụ, na-atọ ọchị, na-adịghị emerụ ahụ, ha na-akpasu ya iwe echiche a na-apụghị izere ezere nke ijide ha n'aka ya; nro ha bu onyinye kasi nma ijiko ha.
A mara mma nhọrọ ileta bụ Kakadu ma ọ bụ Gagudju National Park, nke nọchiri anya ya nke Namargón. Visga ebe a, nke di n'okpuru 200 kilomita site na Darwin, bu ohere anaghi enwe ebe obu na oghere ole na ole igaghi achota njem nke anwansi na ihe omimi.
Y’oburu na onye obia choro ka ya na ndi ozo n’akota ihe ozo na akuko ihe omuma ha g’eme ka ha bia Aborigine obodo na obodo nta, ma ee, ha ga-eme ya na onye nduzi pụrụ iche, onye na mgbakwunye na ijigide ndị obodo nwere ike hụ na nchekwa ha. Ndi mmadu a di n'otu, ya mere ha na-ekwo uzo nke ndu ha, ya mere o ka nma iso onye ma ebe ahu.
Ma ọ bụrụ na echiche a bụ ụsọ osimiri na anwụ, ndị nọ na Australia so na ndị kacha rịọ n'ụwa. Ndị na-ahụ maka ụgbọ mmiri na-achọta ebili mmiri zuru oke iji nwalee nka na njedebe ha.
Ecotourism na Australia nwere nnukwu ikike, ịga na mba ahụ bụ ahụmịhe a na-agaghị echefu echefu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ecotourism na Australia
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green dijo
Ọ bụrụ n’ịchọ mmasị njem nlegharị anya n’enwe mmekọrịta chiri anya na okike, a na-atụ aro njem nlegharị anya nke ukwuu, ọkachasị ka akụ na ụba anyị ghara ịmetụta ma ọkachasị maka ezinụlọ ndị ahụ nwere ụmụaka, na-enyere ha aka ịmụta site na nwata ịkwanyere ugwu ugwu ahụ ugwu kwesịrị.
Ana m akwado ebe nrụọrụ weebụ iji chọọ ebe obibi ime obodo, ọ nweghị ọtụtụ ebe obibi ma ọ bụrụ na ọ nwere ezigbo mma, enwere m mmasị na ya ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma, a na-akpọ ya La Escapada Verde.
Enwere m olileanya na ọ ga - enyere gị aka,
Zaghachi Green Getaway
nke bụ ebe kachasị mma na Australia maka ecotouris na usoro maka njem
Akụkọ dị egwu nke Atrids